Zeziphi Iimpawu ezi-3 zeZodiac zezona ziMthanda kakhulu? - Ukuvumisa Ngeenkwenkwezi
Abanye abantu bayamangalisa ebhedini kwaye bahlala bethatha amaqabane abo ukuya kwilifu elisithoba. Sidwelise ezona zithandwa zintathu zodiac, ngaba uphawu lwakho yenye yazo?
Abanye abantu bayamangalisa kwigumbi lokulala kwaye ngokwenene banokuthatha amaqabane abo ukuba basibekele amafu asithoba rhoqo ebusuku, ewe kunjalo, banesondo ngokoqobo emilenzeni! Xa kufikwa ekwenzeni uthando, wonke umntu unomdla wokwanelisa amaqabane abo, kodwa abanye bethu banetalente yokwenza oko kunabanye. Ngaba uyazibuza ukuba ukutyumza kwakho kunetalente phakathi kwamashiti? Okanye, mhlawumbi ufuna ukuqinisekisa izakhono zakho kubugcisa beKarmasutra? Ngayiphi na imeko, ukuvumisa ngeenkwenkwezi kutyhila ezona zintathu zithandwayo ngokweempawu zodiacac, ke masifumanise ukuba ngubani owenza iqonga.
Njengayo yonke into, iimpawu zethu ze-zodiac zinempembelelo enkulu kuwo wonke ummandla wobomi bethu, nangona kufikwa kwisini! Ewe, ukuvumisa ngeenkwenkwezi kunendima ebalulekileyo ekumiseleni ungumthandi onjani kwaye ukuba ungomnye wezona zinto zihamba phambili kwigumbi lokulala.
Zeziphi iimpawu zodiacac zezona zithandwa kakhulu? I-3 ephezulu ityhile!
1. I-Taurus ivotelwe njengesona sithandwa sibalaseleyo
Ulawulwa nguVenus, iplanethi yothando, iTaurus ngaphandle kwamathandabuzo yiyo elona qabane linetalente kude! Ukuba unethuba lokuchitha ubusuku kunye nale nkanuko kwaye uphawu oluhle , awuyi kuzisola nangaliphi na ixesha kungekudala! I-Taurus luphawu olulunge kakhulu oluthandayo ukuthatha ixesha labo ebhedini kwaye luyabonwabisa ngalo lonke ixesha elizukileyo. Banesisa kwaye bathanda ukukholisa amaqabane abo … Ke musa ukubala ukulala okuninzi xa uchitha ubusuku kunye!
Ukuhambelana kweTaurus -Ngowuphi owona mdlalo wabo ubalaseleyo?
2. Iqabane lesibini elilungileyo kwigumbi lokulala nguLibra
Ikwalawulwa nguVenus, iLibra yi uphawu lwenkanuko enkulu kwaye ngubani ofuna isondo ukuze azive ephila. Aba bantu ba bathanda kakhulu kwaye bahle Kwaye injongo yabo kukubeka umboniso omangalisayo kumaqabane abo, abasithembayo, abayi kudana! Olu luphawu lwesisa kakhulu olonwabelayo ukonwabisa iqabane lalo xa kufikwa kwisini kwaye lijolise ekuthatheni iqabane lalo izulu lesixhenxe rhoqo.
Ukuhambelana kweLibra-Ngubani oza kubanika amabhabhathane?
3. IScorpio siza kwindawo yesithathu
IiScorpios zenza amaqabane agqwesileyo phantsi kwamashiti nawo! Banesibheno esifanelekileyo sesini ekunzima kakhulu ukusichasa kuninzi lwethu. Ukuthetha ngesondo, I-Scorpios izinikezele ngokupheleleyo kwinkanuko yesini kwaye bona thanda ukuzama izikhundla ezitsha kwigumbi lokulala. Awuyi kukruquka ebhedini neScorpio! Nangona kunjalo, iiScorpios zinokuba luphawu lomona kakhulu lwe-zodiac kunye nokufumana, nokuba kufikwa kwisini!
Ukuhambelana kweScorpio-Ngubani ekufuneka uScorpio ekunye naye?
Umxholo onxulumene noko:
Ukuhambelana ngokwesondo komqondiso ngamnye we-zodiac
Uthini umqondiso wakho we-zodiac malunga nobomi bakho bezesondo
Ubudlelwane bamanani: Fumana uqikelelo lwakho lothando lwango-2021
lifanekisela ntoni inani u-3
iinombolo zokubala kwenani le-8
yintoni etsala amadoda e-aquarius
ihagu ubuntu Chinese zodiac
Ngubani igama lengelosi yam?
ndihlala ndibona u-1234 kule wotshi
alex kunye ani nani wokubala amanani